5 Usuku Uhambo Kusukela Milan ngu zemininingwane | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 5 Usuku Uhambo Kusukela Milan ngu zemininingwane
(Kugcine ukubuyekezwa On: 16/01/2020)
Kunzima ukukhetha kuphela 5 Easy Day Trips Kusukela Milan ngu zemininingwane ukwabelana nawe. Italy imfashini capital ekhazimulayo nge okukhethwa kukho izivakashi ngokuvakashela. Akugcini nje egcwele imfashini, kodwa ine umlando Amazing, izakhiwo kanye nezindawo ezinhle to write home about.
1. 5 Usuku Uhambo Kusukela Milan ngu zemininingwane: Lake Como
Easy Usuku Lokuvakashela lethu lokuqala Kusukela Milan iwukuba Italy lesithathu ichibi elikhulu kunawo wonke ngoba usuku ngesitimela, futhi uhlangabezana cruise zikanokusho azungeze amanzi awo. Iyiphi indlela engcono ukuzwa emangalisa alpine kwenkundla kusukela Iminsalo isikebhe, kanye nokuthola ithuba qalaza hlala ngesikhathi enhle Waterside izakhiwo ku Ugu.
Le ndawo ephakathi ye Lake Como iyona avakashelwa ingxenye echibini, futhi nakuba ezindaweni enyakatho naseningizimu ye echibini futhi babe nezindawo zabo isithakazelo lawa ngokuvamile kancane umxhwele: kunjalo, kokuba bonke ezikhangayo esemqoka ngempela zasondelana futhi elula izivakashi nge isikhathi esilinganiselwe.
Qaphela ukuthi ngezinye izikhathi amadolobha isondelene, kodwa ahlukaniswe echibini! Ayikho inkinga, kukhona izikebhe njalo ngaphesheya kwechibi ngakho uzihambela Kulula (imoto izikebhe mancane njalo nokusebenzisa lisuka kwabangaphansi isikebhe ezikhumulweni kuka umgibeli izikebhe).
Ungase umangale ukufunda ukuthi Switzerland nje uhambo lwezinsuku kude Italy inhlokodolobha. Hop phezu Bernina Express kusukela Tirano futhi uzoba khona e ezimbili nje namahora nengxenye.
Uhambo ngokwalo kuwufanele: lena emibi wesitimela uhambo emhlabeni, sinyuka kusukela 429 amamitha angu-phezu 1800 in the Swiss mountains. The stunning alpine scenery viewed from the train window will mean you will not want to leave the train.
Uzogcina edolobheni Swiss of St. Moritz, omunye Switzerland kakhulu ezidumile zokungcebeleka entabeni. This is where the rich and famous spend their holidays or own a chalet.
St. Moritz akuyona ejwayelekile ebabazekayo alpine edolobheni. Sinomuzwa wokuthi zikanokusho incazelo efanele ezingaphezu kuka enhle. Indawo ezungezile kuyinto enhle nakuba futhi kuhlangene emkhathini okhethekile edolobheni, iholidi emangalisayo is ngokuphelele yibhange.
St. Moritz kwenza isisekelo ephelele ukuhlola eningizimu we Canton of Graubünden. Akusona isizinda esihle usuku uhambo kwezinye izingxenye Switzerland, njengoba ezaziyokwenzeka kakhulu isikhathi sokuvakasha. Ikona, Nokho, omunye phezulu yethu 5 Usuku Uhambo Kusukela Milan ngu zemininingwane Nokho! Ngaphandle nightlife edolobheni, imisebenzi esemqoka lapha bengaphandle. Uma uthanda izintaba, ukuhamba ngebhayisikili noma ezemidlalo ebusika, ongazijabulisa ngazo amasonto kule ndawo ezikwenza.
3. 5 Usuku Uhambo Kusukela Milan ngu zemininingwane: Bergamo
Ukuvakashela Bergamo ngokuvamile kuhlangene uhambo Lake Como, kodwa kuwufanele endaweni yalo yethu 5 Usuku Uhambo Kusukela Milan ngu zemininingwane uhlu!
Nge izindonga mlando ngilulekela ngezinyawo amakhilomitha amahlanu ukuba ahaqe edolobheni elidala, futhi mningi bokwakhiwa ephakathi ukubheka, ngoba kunesithembiso usongo enkulu izivakashi zokufuna endaweni kuhle ukuchitha usuku.
Ukugibela funicular kusukela phansi kuya phezulu edolobheni, futhi sibheke Bergamos izikhumbuzo abalulekile, ezifana St. Maria Maggiore Cathedral kanye Colleoni Chapel.
Kugcine, kodwa hhayi okungenani, ungakhohlwa ukuthatha ithutshana lokucabanga ngokwazisa Bergamo Amazing ozungezayo, nge amagquma esisuka ahambe amakhilomitha, yonke indlela phansi Lake ezikude Como.
EMilan Bergamo Izitimela
Mantua ukuze Bergamo Izitimela
Indlela Bergamo Izitimela
Uqeqesha Cremona ukuze Bergamo
I Franciacorta esifundeni inikeza abanye umbukwane, umklomelo iwayini ngawe isampula, e phakathi okukhazimulayo kwenkundla Italy.
Thola ithuba ukuhlangabezana abakhiqizi iwayini ngokwabo! Buza imibuzo mayelana inqubo winemaking, futhi yini eyenza umkhiqizo wabo ikakhulukazi okumnandi kangaka.
Le ndawo Franciacorta DOCG sakhiwe mayelana 3,000 amahektha imivini esehlanganise ezinye izindawo ebabazekayo ngokumangalisayo ugingqe eseningizimu nje Lake Iseo e Italys Lombardy esifundeni. Lena ngaphakathi amathe ibanga eziningi nezinye Italian abadumile iwayini izifunda, ezifana Piedmont entshonalanga Conegliano Valdobbiadene (ikhaya super-premium Prosecco) to the east.
Le ndawo prime kwenza Franciacorta indawo okuyiwa ephelele yokubaleka romantic noma kahle sifaneleka iwayini uhambo, nje amahora akhubeke kusuka Milan, it is accessible and beautiful in equal measure.
Wineries Boutique Franciacorta ngempela sipho into ekhethekile, kodwa yezitolo futhi omkhulu kakhulu! I Franciacorta design esidayisa unemisebenzi ezisendalini ukunikela Shopper savvy, ngakho-ke qiniseka ukuthi uthole izandla zakho phezu izimpahla lapha.
Cremona ukuze Brescia Izitimela
Bergamo ku Brescia Izitimela
EMilan Brescia Izitimela
Treviglio ukuze Brescia Izitimela
5. 5 Usuku Uhambo Kusukela Milan ngu zemininingwane: Venice
uhlu lwethu 5 Usuku Uhambo Kusukela Milan ngu zemininingwane ngeke ibe ephelele ngaphandle kuhlanganise Venice! Yini enye engcono kunalokhu ukuthatha uhambo lwezinsuku kusuka Milan komunye Italy emadolobheni romantic eyigugu, Venice? Nakuba kunzima uvumelane zonke Venice okujabulisa ku ngosuku olulodwa, ungakwazi nakanjani uzame.
Zula cool yayo, ezitaladini cobbled. Yiba ikhofi encwadini edumile Piazza San Marco. Perhaps even stretch to riding a gondola through the canals for a truly special experience.
Wena akungabazeki oqeqeshwe okungenazinkinga ngu echwebeni elikhazimulayo. Jabulela izakhiwo kumnandi ephawula omunye Italy Emadolobheni amaningi athandwayo izivakashi.
Uma kusadingeka isikhathi, inhloko phezu komunye Venice eseduze iziqhingi. Murano idume ingilazi ohlabayo amasiko, futhi mhlawumbe ukuthenga trinket ukuthatha ekhaya emuva.
Ukulungele isipiliyoni 5 Usuku Uhambo Kusukela Milan ngu zemininingwane? Inhloko phezu kuya Londoloza Isitimela Manje! Ayikho imali ezifihliwe, ngaphandle kwenkinga!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “5 Easy Day Trips Kusukela Milan ngu zemininingwane” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/day-trips-milan-train/ ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Bergamo comolake Daytrips EuropeByTrain milan Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi amathiphu isitimela sokuvakasha travelvenice